Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Tanora tamin’ny Desambra 2018
Tanora · Desambra, 2018
Tantara mikasika ny Tanora tamin'ny Desambra, 2018
14 Desambra 2018
Fitetezam-bilaogy Libyana: Hopitaly nahalehibe kamboty sy ny tantaran'ny fodiana fanina
Mpanoratra Fozia Mohamed · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Tantara mampifokofoko tamin'ny nanabeazan'ny hopitaly kamboty iray izay nampiverina ny fitokisan'i Fozia Mohamed amin'ireo dokotera. Hita ato ihany koa ny adihevitra momba ireo mpivarotena mameno tsy misy henatra ny toeram-bahoaka sy ireo andian-dehilahy manara-body amin'ireny toerana ireny ihany.
Antsafa nifanaovana tamin'i Sherwin Noorian, mpiara-manorina ny Farsi Tube
(Marihina fa tamin'ny volana Martsa 2007 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Farsi Tube na You Tube Iraniana izay natomboka tany Etazonia tamin'ny faran'ny taona (2006), dia nahasarika mpitsidika miisa 3.000 isan'andro, hoy ny mpiara-manorina azy, Sherwin Noorian. Amin'ny andavan'andro dia mety hitombo 7.000 ny isan'ny mpitsidika izay tonga hijery ny...
12 Desambra 2018
Mpanoratra Sinisa Boljanovic · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Iran: Mpianatra nanao fihetsiketsehana manohitra an'i Ahmadinejad tao amin'ny Oniversiten'i Tehran
Mpianatra Iraniana an-jatony no nanao hetsi-panoherana ny fanatrehan'ny Filoha Mahmoud Ahmadinejad tao amin'ny Oniversiten'i Téhéran ny Alatsinainy 8 Oktobra 2007. Araka ny filazan'i Al Jazeera, nihiaka ireo mpianatra hoe "Miala ry mpanao didy jadona!" rehefa nanao lahateny izy hanamarihana ny fanombohan'ny taom-pianarana. Bilaogera maro no namoaka sary sy fanehoan-kevitra.
10 Desambra 2018
Ny Tsiambaratelon'i Ejipta an-dahatsary
Iray amin'ireo lahatsary manala ny saron'ireo tsiambaratelo sy marina mahatsiravina any Ejipta ny "Hideous", mampiseho ny fifanoherana eo amin'ny fiainan'ireo mpanana tsy mivaky loha sy ireo mahantrana eny an-dàlambe. Ny "To H.E Mrs Suzanne Mubarak" kosa mitatitra ny fanararaotana ankizy, ny herisetra ataon'ny mpitandro filaminana ary ny fahantrana lalina.
06 Desambra 2018
Manasongadina ny olan'ny bala very ao amin'ny firenena ireo mpikatroka any Libanona
Mpanoratra Nourhan Nassar · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Farha Taysheh is one campaign among many that attempt to fight the inevitable violence resulting from the possession of guns — whether intentional or not. Iray amin'ireo fanentanana izay mikendry ny hiady amin'ny herisetra tsy azo ihodivirana vokatry ny fananana fitaovam-piadiana ny Farha Taysheh- na izany niniana natao na tsia.
04 Desambra 2018
Oman: Miverina tsikelikely ny fibilaoginina
Mpanoratra Riyadh Al Balushi · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Niala tamin'ny Gonu, oram-baratra tropikaly namely ny firenena tamin'ny fiandohan'ity volana ity ny sehatra fibilaogina Omaney. Niezaka nivoatra sy niresaka lohahevitra samihafa ireo bilaogera tamin'ity herinandro ity.
Masoarabo: Mahafatifaty ny vehivavy Ejypsiana
Fivarotan-tena, famorana ny vehivavy ary ny fiarahan'ny vavy samy vavy dia tsy zava-dratsy ferana ho an'ny vehivavy Ejypsiana, hoy ilay bilaogera Ejypsiana Tamr Heneh, tamin'ny taratasy misokatra ho an'ilay mpanolotra fandaharana, Dr Hala Sarhan.